Ihowuliseyili Polycarboxylate Ether Monomer HPEG / TPEG mveliso kunye nabenzi | Gaoqiang
IPolycarboxylate Superplasticizer / PCE
I-JS-103 yeNtsebenzo ePhakamileyo ye-PCE yoTywala boMama
I-JS-104 Compound PCE yoTywala boMama
I-BT-302 Ukugcina okuphezulu kugcina iPCE yoTywala boMama
I-BT-303 Super Slump igcina iPCE yoTywala boMama
Umxube wokuthintela ukhuseleko
Ummeli weCable Grouting
Ummeli wamandla kwangoko
Ukusekwa kweFlash Admxiture
Agent Ukugcina Amanzi
I-Polycarboxylate Superplasticizer Monomer kwimowudi ye-Ether (TPEG-HPEG)
IPolycarboxylate Ether Monomer HPEG / TPEG
I-Polycarboxylate ether yodidi oluphezulu lokunciphisa amanzi sisizukulwana sesithathu se-superplasticizer esekwe kwi-calcium lignosulphonate kunye ne-naphthalene sulfonate. I-SUNBO PC-1030 yimpuphu ebalekayo yasimahla, eyomileyo yokutshiza ephuculweyo ngobuchwephesha obukhethekileyo bokutshiza ubuchwepheshe obomileyo.
Ifomula esezantsi: CH = C (CH) CHCHO (CHCHO) nH
Iklasi: i-nonionic surfactant
Ifomula yeMolekyuli: C H = C (CH) C H O (CHCHO) nH
Uhlobo: I-Nonionic surfactant
Iimpawu zomzimba kunye neekhemikhali
PH (5% isisombululo samanzi)
Ixabiso leHydroxyl, mgKOH / g
Umxholo wePEG (%)
Ukugcinwa kwemali ephindwe kabini (%)
UkuSebenza kunye nokuSebenza:
1. Le mveliso ayinayo ityhefu, ayinakucaphukisa, inamanzi anyibilikayo, inyibilikayo emanzini kunye nezinto ezahlukeneyo zokunyibilikiswa kwendalo, kwaye yinto ebalulekileyo ekrwada kwisizukulwana esitsha soomatshini beglu abasebenza kakuhle.
2. Ukuhanjiswa kobunzima beemolekyuli kule mveliso kumxinwa, umxholo we-polyethylene glycol usezantsi, izinga lokugcinwa kweebhondi eziphindwe kabini liphezulu, kwaye nomsebenzi wokupolishwa uphuculwe kakhulu. Izinga lokuguqulwa kwemveliso liphezulu. Ukusebenza ngokugqibeleleyo kwearhente kugqwesileyo. \_
3. Iarhente yokunciphisa amanzi edityaniswe yile mveliso inezinto ezisasazeka kakuhle kunye nokugcina amandla, kwaye ineziphumo ezilungileyo zokusasazeka kwizinto ezininzi zomgubo ezifana nesamente. Inezinga eliphezulu lokunciphisa amanzi kunye nokusetyenziswa okuphantsi kwesamente. Umgangatho wesamente owongeziweyo yi-0.2% -0.5% Isinciphisi samanzi esenziwe, inqanaba lokuncitshiswa kwamanzi linokufikelela ngaphezulu kwe-30%.
4. Emva kokongeza iarhente yokunciphisa amanzi kwikhonkrithi, umboniso we-adsorption wenziwa ngaphezulu kwamasuntswana esamente, athoba isantya se-hydration yesamente, esenza ukukhula kwekristale yelitye lesamente igqibelele ngakumbi, kunciphisa i-capillary voids yamanzi umphunga, kwaye ubume benethiwekhi bukhulu kakhulu, obunokuphucula ikhonkrithi Ukuqina kungaphezulu kwe-20%. Ingasetyenziselwa amandla-aphezulu (ngaphezulu kwe-C60) ikhonkrithi yentengiso.
5. Iarhente yokunciphisa amanzi eyenziwe yile mveliso inokuyiphucula kakhulu i-rheology kunye neplastikhi yekhonkrithi. Inokuphumeza ulwakhiwo lwekhonkrithi ngokusebenzisa ukuhamba, ukumpompa, kwaye ngaphandle kokungcangcazela, okunokunyusa isantya sokwakha kunye nokunciphisa iindleko zokwakha.
6. Le mveliso iyimveliso eluhlaza kunye nokusingqongileyo, umxholo we-chloride ion: ≤0.1%. Ukuthobela ISO14001 imigangatho yolawulo lokhuselo lokusingqongileyo kwilizwe liphela.
1. Le mveliso inokunyibilika kwamanzi.
2. Le mveliso isebenzisa i-catalyst esebenzayo kakhulu kunye nenkqubo ekhethekileyo yokuhlanganiswa. Ukuhanjiswa kobunzima beemolekyuli kumxinwa, umxholo we-ethylene glycol usezantsi, kwaye inqanaba lokugcina iibhondi kabini liphezulu. Umsebenzi wokumodareyitha uphuculwe kakhulu, izinga lokuguqulwa kwemveliso liphezulu, imveliso yokunciphisa amanzi ye-polycarboxylic acid eyenziwe yimveliso inomxholo ophezulu osebenzayo, kwaye isinciphisi samanzi sinokusebenza ngokugqibeleleyo.
Ukusebenza kunye nesalathiso somgangatho wokunciphisa amanzi:
1) Ukusebenza kwexabiso eliphezulu. Kwimeko yokufumana inqanaba elifanayo lokunciphisa amanzi, inexabiso eliphezulu lokusebenza.
2) Umxube ophantsi kunye nenqanaba eliphezulu lokunciphisa amanzi. Iarhente yokunciphisa amanzi yotywala enomxholo oqinileyo we-20% kunye nenqanaba lokunciphisa amanzi le-1.0% (isixa sezinto zokuqinisa) inokufikelela kwi-30-35%.
3) Ukugcinwa kweplastiki elungileyo. Ukulahleka kwekhonkrithi emva kwe-1h kuncinci.
4) ukuhlala ixesha elide. Ngaba ukunciphisa kakhulu ukusetyenziswa kwamanzi kunye nokuphucula iyahlala eziphathekayo.
5) ukhuselo oluhlaza kunye nokusingqongileyo. Kwinkqubo yemveliso yokunciphisa amanzi, akukho formaldehyde kunye ne-chloride ion eyingozi kwindalo esingasetyenziswanga, kwaye umxholo we-sulfate uphantsi.
isilayi esiqinileyo yi25KG / ibhegi;
I-60% ye-arhente engamanzi engamanzi: i-1000 kg / igubu, amanzi amaninzi, ibhegi yolwelo yesikhongozelo
Le mveliso ayinabungozi, ayinasiphelo, ayinako ukutsha, ukugcinwa kweekhemikhali ngokubanzi kunye nokuhamba. Gcina kwindawo epholileyo, eyomileyo kunye nendawo yokugcina umoya.
Beka ubomi kwishelufa:
unyaka omnye (ukugcinwa okutywiniweyo kubushushu begumbi)
Egqithileyo Isodium Gluconate
Okulandelayo: I-JS -103 Polycarboxylate superplasticizer 50% (uhlobo lokunciphisa amanzi aphezulu)
Ifowuni: +86 18353997870